Adding Ornagai to Mac's built-in Dictionaries - MYSTERY ZILLION
Adding Ornagai to Mac's built-in Dictionaries
August 2010 edited February 2011 in Mac
မနေ့ကအားအားရှိတာနဲ့ စာဖတ်ရင်း အဘိဓာန်ကြည့်လိုက်.. မြန်မာလိုသိချင်ရင် ornagai မှာကြည့်လိုက်နဲ့ ပန်းသီးမှာ တခြားအဘိဓာန်တွေများ ထပ်ထည့်လို့ရမလားဆိုပြီး သိချင်လာတယ်..။ ဒါနဲ့ Googling လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ David's Logbook ရဲ့ http://davidtse916.wordpress.com/2008/01/24/adding-dictionaries-to-the-built-in-dictionary-application-in-leopard/ ပို့စ်မှာ ရှင်းပြထားတာကို သွားတွေ့တယ်..။ သူကတော့ Oxford dictionary ကိုဖြည့်တာပေါ့..။ ကျနော်တို့ကတော့ ကိုစေတန်ရဲ့ Ornagai (Eng-MM) ကိုထည့်ကြည့်ပါမယ်..။
လိုအပ်တဲ့ Tools တွေကို အရင်ယူထားပါ..။
• DictUnifier (http://code.google.com/p/mac-dictionary-kit/) - ဘယ်ဗားရှင်းမဆိုရပါတယ်..။ ကျနော်ကတော့ 1.1 stable version ကိုသုံးထားပါတယ်..။
• ကိုစေတန်ရဲ့ Ornagai stardict en version - http://github.com/saturngod/ornagai-V2/downloads (ornagai_en.zip)
အားလုံးစုံပြီဆိုရင်.. DictUnifier ကိုအရင် install လုပ်လိုက်ပါ။ သူက stardict dictionaries တွေကို ပန်းသီးမှာသုံးလို့ရအောင် ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းမယ့် package ဟာ tar archive ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်..။ ဒီတော့.. ornagai_en.zip ကို တစ်နေရာရာမှာ အရင်ဖြည်ချလိုက်ပါ..။ ပြီးရင် Terminal.app ကိုဖွင့်.. ခုနကဖြည်ထားတဲ့နေရာကို change directory လုပ်ပါ..။ tar command ကိုသုံးပါမယ်..။
tar czf desired_name.tar.bz2  folder_name
အိုကေ.. ဒါဆိုရင် DictUnifier မှာသုံးဖို့ ornagai archive ရပါပြီ..။ DictUnifier ကိုဖွင့်ပါ..။ သူ့ UI ကရှင်းပါတယ်..။ Choose ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းမယ့်အဘိဓာန်ကိုရွေးပါ..။ ပြီးရင် dictionary name and id မှာ ကြိုက်ရာဖြည့်ပြီး Convert ပြောရုံပါပဲ..။
ပြောင်းတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် Dictionary App တက်လာပါမယ်..။ တကယ်လို့ မမြင်ရသေးဘူးဆိုရင်.. Dictionary -> Preferences မှာ ကျနော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ dict name ကိုရှာပြီး ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒီလောက်ဆို ရလောက်ပါပြီ..။ Dictionary Sources မှာ All ကိုရွေးပြီး ကြိုက်တဲ့စာလုံးရိုက်ကြည့်တော့ဗျာ..။
ကျနော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ Dictionary က Places -> username -> Library -> Dictionaries အောက်မှာရှိပါတယ်..။ တစ်နေရာရာမှာ copy ကူးထားလိုက်ပါ..။ iPhone app iBooks ရဲ့ dictionary မှာသုံးလို့ရပါတယ်..။
ကျွန်တော့်မှာတော့ choose dictionary လုပ်လိုက်ရင် dictionary ကို load မလုပ်သွားဘူးဗျ။ version2နဲ့မှ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် version2beta မှာကတော့ en2mm ရပေမယ့် mm2en ကို convert လုပ်လို့မရပြန်ဘူး။ prepare index data ဆိုပြီး ရပ်ရပ်သွားလို့။
အင်း.. ဟုတ်တယ်ဗျ..။ ကျနော့်ဆီမှာလည်း mm2en မရဘူး..။ အဲဒါကြောင့်လည်း ထည့်မရေးတော့တာ..။
February 2011 edited July 2013 Registered Users
အကိုတို့ ရေ ကျွန်တော်စမ်းမလို့ ornagaien.dictionary.zip ကို download ပြီ လုပ်ကြည့်တာမရဘူး ဘယ်ဟာကို ဆွဲရမှာလဲမသိဘူး
အကို...Mac Book မရှိတဲ့သူတွေအတွက် stardic format dictionaries တွေကို apple format dictionary သို့ပြောင်းပြီး download link တင်လိုက်ရင် အရမ်းကောင်းမှာဘဲ။ oxford, cambridge, longman, collin စတဲ့ stardict format တွေတော့ရှိပါတယ်။ internet မှာလည်းပေါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် apple format ကိုလိုက်၇ှာနေတာတော့ တော်တော်လေးကြာသွားပြီး။ google ကလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တင်ပေဒစေချင်ပါတယ်။
@abaddon , try https://github.com/downloads/saturngod/ornagai-V2/ornagaien.dictionary.zip . After downloading unzip it. Paste in ~/Library/Dictionaries/
For OS X Serria,
1) Download the dictionary from this web link: http://www.ornagai.com/#/.
2) Paste it into to ~/Library/Dictionaries
3) Go to Dictionary/Preferences
4) Select Ornagai Unicode (As I use unicode version)